Warqad Mareykanka uu ka soo saaray ciidanka Iraq ka jooga oo jahwareer dhalisay | Dhexnimo Media
Home Maqaalo Warqad Mareykanka uu ka soo saaray ciidanka Iraq ka jooga oo jahwareer...
Warqad Mareykanka uu ka soo saaray ciidanka Iraq ka jooga oo jahwareer dhalisay
Jahwareer ayaa ka dhashay warqad kasoo baxday militariga Mareykanka ee Iraq, oo si hoose loo dusiyey, taasi oo lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay isku diyaarinayaan inay dalkaas ka baxaan.
Warqaddaas ayaa waxaa mar dambe diiday wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka, oo sheegtay in ciidamada Mareykanka aysan ka baxeyn Iraq.
Warqadda oo uu qoray taliyaha ciidamada Mareykanka ee jooga Iraq, Brig. Gen. William Seely ayaa loo diray taliyaha ciidamada Iraq Lt. Gen. Abdul Amir, waxaana lagu sheegay in ciidamada Mareykanka “ay isku diyaarinayaan maalmaha ama toddobaadyada soo socda inay ka baxaan Iraq.”
“Waxaan ixtiraameynaa go’aanka madax-banaanidiina ee aad ku amarteen bixitaankeena,” ayaa lagu yiri warqadda.
Warqadda ayaa timid maalin kadib markii baarlamanka Iraq uu meel-mariyey qaraar ku baaqaya in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan dalkaas. Qaraarka ayaa ah soo jeedin kaliya, mana ahan mid xukuumadda ku qasbaya inay ku dhaqanto.
Saacado kadib warqadda, ayaa xogahayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper iyo taliyaha talisyada ciidamada Mareykanka Jeneral Mark Milley waxay qabteen shir jaraa’id oo ay ku sheegeen inaysan jirin go’aan ciidamada Mareykanka looga soo saarayo Iraq.
Jeneral Milley ayaa sheegay in warqadda ay ahayd “mid qalad ah”. Wuxuu intaas ku daray inay ahayd qabyo qoraal, aan loogu talo-gelin in Iraq loo diro.
Mareykanka ayaa waxaa Iraq ka jooga qiyaastii 5,000 oo askari oo ciidamada dalkaas ka caawinaya dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.
Previous articleWararka Todobaaka Dhexnimo Tv Soo Jeediye: Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar
Next articleMareykanka oo sheegay in weerarkii Saldhigga Lamu aysan ku lug laheyn Iran